स्टेफन एल शारवाई बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू इटालियन फुटबल खेलाडीहरू स्टेफन एल शारवाई बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा प्रसिद्ध हो; "The Pharaone"। हाम्रो स्टेफन एल शारवाई बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु लाई पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र अनलाईन भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको गति, ड्रिबल र फुर्तीको बारेमा, तर थोरैले हाम्रो स्तिफन एल शारावीको बायोलाई ध्यान दिन्छ जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
स्टीफन एल Shaarawy बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
स्तिफन करीम अल-शारावीको जन्म २ October औं अक्टोबर १ day 27 २ को दिन इटालीको सवोनामा भएको थियो। उनको जन्म इटालीकी आमा लुसी एल शारावी र इजिप्शियन बुबा सब्री एल शारावीमा भएको थियो जसले कडा आर्थिक अवस्थाका कारण इजिप्ट छाडे र इटाली बसाई आफ्नो परिवार सुरु गरे। तल दुबै अभिभावकको फोटो छ।
जस्तै एडिन Dzeko, स्टेफन एक नाममात्र मुसलमानको रूपमा उठाइएको थियो र उनी आफ्नो एक र मात्र भाइ म्यानुएल शारोवीसँग उठे जसले आफ्नो एजेन्सी हुन र फुटबलको एक ठूलो समर्थक हुन्छ।
स्टेफनको बाल्यकालको कथा रमाईलो छ, यदि अनौठो होइन भने - यो एक प्यारो सानो केटाको बारेमा छ जसले आफूलाई असाधारण फुटबल प्रतिभाको साथ पाएको पायो। वास्तवमा, उहाँ आफ्नो बाल्यकाल देखि फुटबल सपना देख्यो। सानो छँदा, स्तिफन धेरै खेलहरू खेल्ने बानी थियो तर फुटबलमा बढी संलग्न छ। जब उहाँ पाँच वा छ वर्षका हुनुहुन्थ्यो, उनका आमाबुबाले उनलाई लेभिनो, साभोनाको क्लबमा जानको लागि अनुमति दिनुभयो। ११ बर्षको उमेरसम्म स्तिफन त्यहाँ बसे।
एक पेशेवर फुटबलर बनने को फोकस को बावजूद, स्टेफन अझै उनको माम को धन्यवाद मा अध्ययन गर्न सफल भयो। उहाँ आफ्नो कक्षाको शीर्ष हुनुहुन्थ्यो। उनका आमाबाबुले सहमति पाएका थिए कि उनको छोराले आफ्नो पहिलो क्लबको लागि दर्ता गराउनु अघि स्कूलको अन्त्य गर्नु पर्छ जस्तो कि तल दिइएको आईडीमा देखियो।
शिक्षाविद्हरूको कारण, एल शारावी पूर्ण-समय फुटबलको लेट स्टार्टर भयो। उनले चौथो वर्षको उमेरमा जेनोवाबाट युवावस्थाको जीवन सुरु गरे। ढिलो सुरु भएता पनि, स्टीफन कुनै पनि समय मा पहिलो टीम मा प्रवेश गरे र यसले उसलाई खेलको हरेक अर्थमा बढ्न मदत गर्‍यो। उनका रोल मोडल काकाका भिडियोहरू हेरेर, स्तिफनले एउटा स्प्रिboardबोर्ड पाए जुन लगातार सुधारको लागि अग्रसर भयो।
उनको पिताले पनि उनको योगदान दिए र उनको फुटबल मित्रले आफ्नो परिवारको घर पछि उनको सानो पछाडी खेल्न अनुमति दिएनन्।
स्टीफन एल Shaarawy बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -प्रसिद्धिको कारण
स्टेफनले आफैंलाई विश्वास गरे र उनले गरेको सबै कुरामा प्रतिबद्धता र दृढता देखाउँछन्।
जहाँसम्म फुटबलको सवाल थियो, यो उनको खुट्टा भन्दा उसले आफ्नो टाउकोले के गरेको थियो भन्ने बारेमा बढी थियो। जित्ने र हराउने परिस्थितिहरूमा स्तिफन नम्र नै रहे। ऊ मेरा साथीहरू र परिवारबाट आफूले सुधार गर्न सक्ने क्षेत्रमा सल्लाहहरू दिनको लागि प्रयोग गरिएको थियो। २१ डिसेम्बर २०० 21 मा, जब उहाँ १ 2008 बर्षको हुनुहुन्थ्यो, सेरी एको इतिहासको आठौं कान्छी खेलाडी बन्ने पहिलो टीमले डेब्यू गर्नुभयो जसले इटालियन शीर्ष डिभिजनमा डेब्यू गर्नुभयो।
तथापि, उनको क्यारियर को सीरीज को कारण खट्टा चला्योnjury-hit अभियान जो 2013 देखि 2015 सम्म स्प्यान गरियो। यो पछि उनको दायाँ खुट्टामा असफल शल्यक्रिया गरेपछि प्रभावकारी रूपमा निको पार्न सकेन। लामो चोटको अवधि पछि अर्को चोटले उसको क्लबले मिलानलाई एक सिजन-लन्डनमा मोनाकोमा किनेको विकल्पको साथ जहाजमा निर्णय गर्यो।
ऋणमा, मोनाकोले उसलाई बेवास्ता गरे र उनको अवस्था खराब भयो। त्यो उधार ऋतुको मौसममा, स्टेसनले एक समयमा स्क्वाड बाहिर जमेको भए कि उनीहरूको खरीद गर्न सशर्त दायित्व सक्रिय गर्दै 1 खेल छोटो मोनोको थियो। निराशाजनक रूपमा, उनले मिलानलाई फिर्ता पठाएको थियो जसले तुरुन्तै रोमालाई ऋण लिएका थिए किनभने उनको ऋण सम्झौता अधिक अनुकूल र स्थायी थियो। स्टेफनले आह बनाएपछि चमत्कार आयोएल्फ बोस्पियन फ्लास्टेड बैकेल लक्ष्य (तल भिडियो) रोमका लागि जसले आफ्नो सम्झौतालाई स्थायी रहन बनायो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
स्टीफन एल Shaarawy बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
एक रिपोर्ट छ कि स्टेफन आफ्नो बचपन प्रिय, एस्टर Giordano संग खेल को मैदान मा आफ्नो सम्बन्ध शुरू गर्यो। उनीहरूको सम्बन्ध उनीहरूलाई उत्कृष्ट प्रेमको सट्टा साँचो प्रेममा लिए। स्टेसनले एक पटकको सम्झना दिलाएका थिए कि उनको सबैभन्दा प्रारम्भिक बचपनको सम्झनाहरू जुन Ester को लागी उनीहरूको प्रेम घोषणा गर्दै थिए र विश्वास गर्दछ कि उनीहरुले कुनै दिन विवाह गर्न सक्थे।
उनको पेशेवर क्यारियर को अलावा, स्टेफन अल-शारवी को उनको प्रेमिका संग जीवन को आनंद ले जान्छ, Ester Giordano जसलाई उहाँ गम्भीरतासाथ डेटिङ हुनुहुन्छ।
तिनीहरूले लेखनको रूपमा विवाहित भएननन न त उनीसँग कुनै जैविक वा स्वीकार गरिएको बच्चाहरू छैन। तिनीहरू सबैले हरेक दिन अप्ठेरो हुँदैछन् र राम्रो गुणवत्ताको समय समुद्र-पक्षमा बिताउँछन्।
सनफान अल शराबी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-व्यक्तिगत तथ्यहरू
स्टेफन एल शरायसँग उनको व्यक्तित्वका विशेषताहरू छन्। बन्द गर्दै, हामी तल चित्रित उनको लाइभबगर रेटिङ पेश गर्दछौं।
उनको मनपर्ने डिश: Trofie al pesto - एक ठेठ जेनोभिस डिश र क्यान्टोन फ्राइड चावल।
तिनको शक्ति: उहाँ सहकारी, राजनयिक, दयालु, निष्पक्ष दिमाग, सामाजिक हुनुहुन्छ।
आफ्नो कमजोरीहरू: उहाँ असीम हुनसक्नु, टकराउनुबाट बचाउनुहुन्छ, एक कठोर र आत्म-दयालु हुनेछ।
के त्यो मनपर्छ: ऊ फ्लाईबोर्डि loves मन पराउछ (तल चित्रमा देखाइएको छ), अन्धविश्वासी हो, प्री-म्याच रीतिथिति, भद्रता, अरूसँग बाँडफाँड र बाहिर रमाइलो गर्दा (फेरि तल देखाईएको छ)।
उहाँले के नमनपराउनुहुन्छ: कहिलेकाहीँ, स्टेफनले हिंसा, अन्याय, लोहामाउथ, अनुरूपतालाई मनन गर्दैन।
सारांशमा, स्टेफन एक शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष हो र एक्लै रहन घृणा हो। उनको लागि साझेदारी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। स्टेसनको अनुसार, उहाँसँग साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ जुन तिनीहरूको व्यक्तित्वको आन्तरिक कोर र एस्टरको लागि उसको प्रेम हो। उहाँ कसैलाई हुनुहुन्छ जो द्वन्द्वबाट बचाउनको लागी केहि गर्न को लागी तयार छ, जबसम्म सम्भव छ शान्ति।
स्टीफन एल Shaarawy बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
स्तिफन एक मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ जुन एक पटक उसको बुवा साब्री एल शारावीले संचालन गरेका थिए। तल चित्रित दुबै अभिभावकले उनीहरूको बच्चाको their० को दशकको अवधिमा सुरू गरे।
यो उल्लेखनीय छ कि बच्चाको रूपमा, स्तिफनसकी आमा लुसिया शारावीले आफ्नो छोराको शिक्षालाई निरन्तरता दिइरहेका थिए जबकि उनका बुवा शिक्षा र फुटबल दुवैको संयोजन चाहन्थे।
भाइ: स्टेफनको एक बच्चा भाई छ जसको नाम मनुएल एल शारावी छ। आफ्नो ठूला भाइको सम्पत्तीमा झुक्नुको सट्टा, तल चित्रण गरिएको मानुएल फुटबल एजेन्ट बन्न गयो।
उनको आमा लुसिया को लागी सबै धन्यवाद। २ 25 बर्ष भन्दा पनि कम उमेरमा, मनुएल शारावी इण्डोको सेक्रेड हार्टको क्याथोलिक विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र संकायबाट बजार र व्यवसाय रणनीतिमा स्नातकोत्तर धारक भए। उनको शैक्षिक अनुभव अब आफ्नो भाइको क्यारियरको प्रबन्ध गर्न आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा सामिल हुन्छ।
सनफान अल शराबी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-उसको कपाल
एक पटक, स्तिफनको फ्यान Aldo एक पटक भने…“मेरो छ वर्षको छोरा तपाईको जस्तो कपाल चाहान्छ। उसले के गर्नुपर्छ? ”
"त्यहाँ गर्न एक मात्र कुरा छ र त्यो मेरो कपालमा उसलाई लगिनु हो! मसँग तीन जना छन् - एक सभोनामा, एउटा मिलानमा र अर्को यहाँ रोममा। ”
एल्डोको छोराले स्तिफनको कपाल बाँधेर तल देखा पर्यो।
बिहानै बिहान तिम्रो कपाललाई कचौरा लाग्न को लागी लाग्छ? र तपाई कुन जेल प्रयोग गर्नुहुन्छ?
स्तिफनको प्रतिक्रिया ...“धेरै लामो छैन। आजकल यसलाई बिरलै कुनै चीजको आवश्यक पर्दछ। म पनि यो कंघी छैन। म यसलाई हेयर ड्रायरको साथ मात्र प्रहार गर्दछु, केही मोमको प्रयोग गर्दछु - जेल होइन - र केही हेयरस्प्रेले यसलाई स्थानमा राख्नको लागि र त्यो त्यस्तै हो।
सनफान अल शराबी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-उनको आइडल
स्टीफन एल Shaarawy अनुसार ... "म जवान हुँदा जब म कहिलेकाँही काका हेर्छु- जब त्यो एसी मिलन थियो। त्यो पिच र बन्द दुवै मेरो भूमिका मोडेल थियो। उहाँ सधैं साँच्चिकै तल सम्म पुग्नुभयो, म पनि भेट्नुभन्दा अघि पनि। त्यसपछि मलाई उनलाई एक पटक थाहा भयो जब हामी रियल म्याड्रिडलाई अमेरिकामा मित्रतासाथ खेल्नुभयो र उहाँ साँच्चै जस्तो कल्पना गर्नुहुन्थ्यो - एक अद्भुत व्यक्ति एक शानदार फुटबलर हुनुको साथै। "
सनफान अल शराबी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-उसको बुबाको भूमिबाट अस्वीकृत
सुरुमा, स्टेफन को लागि खेल्न योग्य थिए मिश्र राष्ट्र फुटबल टोली, तर द्वारा अस्वीकार गरिएको थियो त्यसपछि कोच हसन शेटा जो अज्ञात रूप देखि stत्यसमा “सबै छैन Egyptian विदेशी लिगको लागि खेल्दा राष्ट्रिय पक्षको लागि खेल्छ।
निराशाजनक रूपमा, अल शारवीले फेरि खेल खेल्न थाले इटाली U-17 टोली जहाँ उनले भाग लिइन् in दुबै 2009 UEFA U-17 यूरो र 2009 फीफा U-17 विश्व कप.
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो स्टेफन अल शरावलाई बचाउनको लागि धन्यवाद बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्याङ्क। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईं केहि देख्नुहुन्छ जुन यो लेखमा ठीक देखिँदैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।
तिमी मेरो प्यार हो कि तिमी यो हो। यो नयाँ नोभेम्बर, यस क्षेत्र को लागि कुनै पनि मूल्य छैन।
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 15